We.com.mm - ဟယ်ရီပေါ်တာမင်းသမီးလေး အမ်မာဝပ်ဆန်နဲ့ ဒိတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်လေး (၇) ယောက်
နာမည်ကျော် အင်္ဂလိပ်မင်းသမီးချောလေး အမ်မာဝပ်ဆန် (Emma Watson) ကို ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်း တွေထဲက Hermoine Granger ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့ လူသိများပါတယ်။ အမ်မာကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီက မွေးဖွားခဲ့တာကြောင့် အခုဆိုရင် အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ရောက်ရှိနေပါပြီ။ အမ်မာဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက် ကတည်းက အနုပညာလောကထဲ ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကစလို့ ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာက ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟယ်ရီပေါ်တင်အပြင် တခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများစွာကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အမ်မာဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က Beauty and the Beast နဲ့ The Circle ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ Little Woman ဇာတ်လမ်းမှာလည်း အမ်မာ့ကို တွေ့မြင်ကြရဦးမှာပါ။
သူရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလိုပဲ အမ်မာ့ ရဲ့ အချစ်ရေးဟာလည်း သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုအချိန်အထိ အမ်မာဝပ်ဆန် တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သတင်းထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေ အကြောင်းကို လက်လှမ်းမီသလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Tom Ducker
အမ်မာဝပ်ဆန်ရဲ့ ရည်းစားဦးကတော့ တွမ်ဒက်ခ်ကာလို့ နာမည်ရတဲ့ ရက်ဂ်ဘီအားကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်လောက်က တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီး တစ်နှစ်ကျော် တွဲခုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမ်မာဟာ သူ့ထက် ၇ နှစ်ကြီးတဲ့ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျေးဘယ်ရီမိုးရ်နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ တွဲခုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အမ်မာဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက Brown University မှာ ကျောင်းသွားတက်ခဲ့တာကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးဟာ အနေဝေးခဲ့ပြီး ချစ်သက်တမ်း သိပ်မကြာရှည်ခဲ့ပါဘူး။
3. Rafael Cebrian
မင်းသမီးချောအမ်မာဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာတုန်းက Brown University မှာ စပိန်ဂီတသမား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Rafael Cebrian နဲ့ တွဲခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလမှာတော့ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။
4. Will Adamowicz
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာတော့ အမ်မာတစ်ယောက် အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ချိန်မှာ ဝီလ်အဒမ်မောဝစ်ဇ်နဲ့ တွဲခဲ့ပြီး ချစ်သက်တမ်း ၃ နှစ် ကြာခဲ့ပါတယ်။
5. Matthew Jenney
အဒမ်မောဝစ်ဇ်နဲ့ လမ်းခွဲပြီးနောက်မှာတော့ အောက်စဖို့ဒ်က ရက်ဂ်ဘီကစားသမား မက်သရူးနဲ့ တစ်နှစ်ကြာ ထပ်မံတွဲခုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိသျှတော်ဝင်မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ မင်းသားဟယ်ရီဟာလည်း လူပျိုဘဝတုန်းက ဟယ်ရီပေါ်တာမင်းသမီး ချောလေး အမ်မာနဲ့ တွဲခုတ်ဖူးတယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက အမ်မာဟာ ဗြိတိသျှတော်ဝင် မင်းသမီးလေးဖြစ်မယ့်အရေးကို စွန့်လွှတ်ပြီး လွတ်လပ်စွာပျံသန်းခွင့်ရတဲ့ အနုပညာရှင်ဘဝကိုပဲ ရွေးချယ်ခဲ့ တယ်လို့တောင် သတင်းကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေပါလို့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အမ်မာဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်လောက် Glee ဇာတ်လမ်းက သရုပ်ဆောင်မင်းသား Chord နဲ့ ၆ လောက်ကြာအောင် တွဲခုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလတ်တလောမှာတော့ အမ်မာတစ်ယောက် ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းထဲက သရုပ်ဆောင်ဖက် မင်းသားချော တွမ်ဖဲလ်တန်နဲ့ တွဲခုတ်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ တွမ်ဟာ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဇာတ်လမ်းမှာ Draco Malfoy အဖြစ် ပင်တိုင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့သတင်းဟာ လအတော်ကြာ ကတည်းက ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ အခုရက်ပိုင်းမှာတော့ အတည်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထပ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။